Momba anay - Shanghai Gianty Trading Co., Ltd.
Ny maha-mpisava lalana ny ho avy maintso ary tsy manisy lanja ny mpanjifa amin'ny fotoana mitovy.
Gianty dia milalao ny iray amin'ireo fehikibo lehibe amin'ny rafi-pitaterana milamina eo amin'ny tontolo iainana. Gianty mandray andraikitra bebe kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Niorina tamin'ny 2007, i Gianty dia mandray anjara amin'ny famokarana sy fanondranana vokatra milanja eco ho an'ny mpanjifan'ny mpanamboatra fiara, manolo-tena hanao izay madio kokoa. Ao amin'ny Shanghai no misy ny sefom-pokontany Gianty ary misy zavamaniry roa any Ningbo sy Hunan.
Gianty dia mpanamboatra tanteraka miaraka amina endrika an-trano, famolavolana prototype ary fanamboarana vokatra. Nanamboatra ekipa R&D elita amin'ny orinasa ny orinasa miaraka amin'ny manampahaizana manokana momba ny teknikan'ny compostable, ny fikarohana bioplastika ary ny fampandrosoana ny prototype. Ny ekipa R&D dia mitarika sy mampiasa fikarohana siantifika hanatsarana ireo vokatra efa misy sy hamolavola vokatra vaovao hahasoa ny mpanjifa. Ny traikefa sy ny manampahaizana manan-karena dia manampy amin'ny famoronana vokatra mifanaraka amin'ny fangatahana tsena manokana.
Shanghai Gianty no manjaka amin'ny ankamaroan'ny orinasa fanondrana. Ningbo Gianty no tompon'andraikitra voalohany amin'ny famokarana kitapo azo soloina. Hunan Gianty dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famokarana vokatra vita amin'ny lovia sy volafotsy azo averina. Ireo zavamaniry Gianty anisan'izany ny orinasa Ningbo sy Hunan dia misy fitaovana famokarana 17. Mihoatra ny 90% ny milina mampiasa solosaina sy robot. Gianty ekipa nasionaly ekipa novolavolaina tao amin'ny trano dia ahafahan'ny Gianty manamboatra vokatra izay mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa. Azo atao amin'ny telo andro sy dimy andro ny santionany farany ho an'ny santionany farany.
Ny ekipa mpivarotra avy any ivelany Gianty no miantoka ny fifandraisana tsara sy mahomby amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao isan-karazany ary mametraka ny fotoana ilain'ny mpanjifa amin'ny ekipa hafa (izany hoe R&D, ekipa mpamokatra ary trano fanatobiana entana). Gianty dia mpanamboatra ary mpivarotra amin'ny latabatra fandriaka-menaka manitra ekoloôka any Sina. Navoakan'ny mpanjifa mihoatra ny 20 izao tontolo izao ny vokatra azony.
Niorina tamin'ny 2007, i Gianty dia mandray anjara amin'ny famokarana sy ny varotra ireo vokatra tia ny tontolo iainana ho an'ny mpanjifa mifanentana, manolo-tena amin'ny fanadiovana izao tontolo izao. Ao amin'ny Shanghai no misy ny foiben'ny Gianty ary ao amin'ny Ningbo, any Sina no misy ny zavamaniry.
Taorian'ny fikarohana sy ny fandrosoana 12 taona, Gianty dia lasa iray amin'ireo mpanamboatra sy mpivarotra amin'ny fitrandrahana akora azo alaina / biodegradable any Sina, ary nanorina fiaraha-miasa matanjaka amin'ireo mpanjifa any Azia, Eropa ary Amerika Avaratra. Tamin'ny taona 2016, vola mitentina 10 tapitrisa dolara amerikana ny totalin'ny fidiram-bola.
Ny vokatra mavesatra ihany no ataontsika fa tsy vahaolana maitso ihany. Ny karazana rindrambaiko maharitra maharitra dia manome vokatra mahasoa ny tontolo iainana amin'ny vidiny mifaninana.